Topaz bụ ezigbo nkume bara ụba mana topaz anya Cat dị obere - vidiyo
Topaz bụ ezigbo okwute dịkarịsịrị mana mana topaz to cat na-ahụkarị. Isi mmalite abụọ bụ Burma (Mianma) na Madagascar
Ọdịdị topaz dị ọcha bụ ihe na-enweghị ntụpọ ma na-emegharị ya ma ọ na-ejikarị adịghị ọcha, ụcha topaz na-acha ọbara ọbara, odo, isi awọ, ọbara ọbara-acha ọbara ọbara, ma ọ bụ agba aja aja. Ọ pụkwara ịbụ ọcha, acha odo odo, acha anụnụ anụnụ, ọlaedo, pink (obere), ọbara ọbara-edo edo ma ọ bụ opaque na transpecent / translucent.
Topaz oroma, bụ akara ụbọchị ọmụmụ ọdịnala nke ọdịnala, akara nke ọbụbụenyi, na steeti steeti US nke Utah.
Ipa topaz na-acha odo odo bụ odo, pink (obere, ma ọ bụrụ na eke) ma ọ bụ pink-oroma. Brazilian Imperial Topaz nwere ike inwe odo odo na-acha odo odo odo odo, mgbe ụfọdụ ọbụna violet. A na-emeso ọtụtụ aja aja na-acha odo odo ma ọ bụ na-acha odo odo iji mee ka ha na-acha odo odo, ọla edo, pink ma ọ bụ violet acha. Ụfọdụ nkume topaz na-achị achị nwere ike ịdaba na ìhè anyanwụ maka ogologo oge.
Blue topaz bụ steeti steeti Texas nke United States. Dị ka ọ na-adịkarị na-acha anụnụ anụnụ bụ ihe na-adịghị ahụkebe. A na - enyekarị ihe na - acha, isi awọ ma ọ bụ edo edo na - acha anụnụ anụnụ na ihe na-acha anụnụ anụnụ na-ekpo ọkụ ma na-enwu ya iji mepụta ihe na-acha anụnụ anụnụ karịa.
A na-ejikọkarị Topaz na nkume dị egwu nke nkume granite na ụdị rhyolite. Ọ na-agbasi ike na pegmatites granite ma ọ bụ n'osisi vaịn na rhyolite na-agafe gụnyere ndị na Topaz Mountain dị n'ebe ọdịda anyanwụ Utah na Chivinar na South America. Enwere ike ịchọta ya na ntụpọ na cassiterite dị iche iche gụnyere ugwu Ural na Ilmen nke Russia, Afghanistan, Sri Lanka, Czech Republic, Germany, Norway, Pakistan, Italy, Sweden, Japan, Brazil, Mexico, Flinders Island, Australia, Nigeria na United States.
N'iji ihe omumu, nyocha, nkwanye okwu ma obu pusi anya, bu nmetuta ihe ngosi anya nke puru ighota. Site na French "nyocha nke nkata", nke pụtara "anya nkịta", nkwurịta okwu na-esite ma ọ bụ site na nsị ụrọ nke ihe, dịka anya catmaline anya, cat cat anya topaz, ma ọ bụ site na fibrous inclusions ma ọ bụ cavities n'ime nkume, dị ka pusi anya chrysoberyl. Ihe ndị na-eme ka ndị mmadụ na-akparịta ụka bụ ihe dị mkpa. Ihe nchoputa a na-enyocha amaghi ihe omuma nke tubes ma o bu ihe eji eme ihe. Akwukwo a na-eme ka ha kwado kwekorita anya na anya nke anya. Ngwunye nke nkedo nke mkpa a bụ naanị otu n'ime akụrụngwa nkume atọ nke orthorhombic nke chrysoberyl, n'ihi nsụgharị na ntụziaka ahụ.
Ọdịdị ahụ yiri nchapụta nke silk spool. Ogologo ìhè nke ìhè na-enwupụta ìhè na-adị mgbe niile maka ntụziaka nke eriri. Maka nnukwu nkume iji gosipụta mmetụta a ka mma, ọdịdị ahụ aghaghị ịbụ cabochon. Gburugburu isi ihe dị elu, kama ịkọwapụta ya, ya na eriri ma ọ bụ ihe owuwu na-emepụta ihe dịka isi nke gọọmenti gwụchara. Ihe kachasị mma e mechara na-egosi otu ihe. Ìgwè ọkụ nke na-agafe nkume mgbe ọ na-atụgharị. Nkume ndị mara mma nke àgwà dị ala na-egosipụta nkwalite ụda dịka ọ dị iche iche quartz. Nkume ndị a na-atụghị anya na-egosi mmetụta ahụ nke ọma.
Anya cat topaz sitere na Burma
zụta eke eke cat topaz n'ụlọ ahịa anyị
Nnụnụ aquamarine anya
Tags Aquamarine, Cat anya